တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေ သန်း ၅၀၀ စာ ထောက်ပံ့ပေးထား - Xinhua News Agency
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့၌ မေ ၁၂ ရက်က စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၅၀၀ စာ နှင့် အသက်ရှူစက်များ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု၏ ခြောက်ပုံတစ်ပုံခန့် ပမာဏ ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရာဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Guo Xuejun က ဆင်ဟွာနှင့် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဆေးစွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့ရန် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံက အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား တက်ကြွစွာ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအတွက် ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ လိုအပ်ချက်များအား အမြဲတမ်းကူညီဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးသားရေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် တရုတ်ကာကွယ်ဆေးလုပ်ငန်းများသည် ယူအေအီး ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား ၊ အီဂျစ် ၊ ဘရာဇီး ၊ တူရကီ ၊ ပါကစ္စတန် နှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတို့အပါအဝင် နိုင်ငံများတွင် အလုံးရေ သန်း ၂၀၀ ကျော် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ ပူးတွဲကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Guo Xuejun က ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံ ၁၄၀ အနက် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ၈၄ နိုင်ငံသည် ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် တရုတ်ကာကွယ်ဆေးများ အသုံးပြုရန်အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ယင်းနိုင်ငံများအားလုံးကို ကောင်းမွန်သည့် တုန့်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ကာကွယ်ဆေးများ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အနာဂတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် ၊ စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအား ကြီးမားသည့်အထောက်အပံ့ ပြုလုပ်ရန် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် လက်လှမ်းမီခြင်းတို့အား ထပ်မံတိုးတက်စေရန် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Guo Xuejun က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, July 10 (Xinhua) — China has provided more than 100 countries and international organizations with 500 million doses of COVID-19 vaccines and concentrates, accounting for one-sixth of the current global COVID-19 vaccine production,aForeign Ministry official told Xinhua on Friday.
Photo – A forklift unloads China-donated COVID-19 vaccines fromamilitary transport plane shortly after it landed in Dhaka, Bangladesh, on May 12, 2021. (Xinhua)